Ndị Minista Na-ahụ Maka Njem Nleta n'Africa kpebisiri ike iwusi ike njem nleta na kọntinent
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Ndị Minista Na-ahụ Maka Njem Nleta n'Africa kpebisiri ike iwusi ike njem nleta na kọntinent
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Namibia • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Ndị minista Africa site na nzukọ UNWTO kwere nkwa na mba ndị so n'Africa ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji guzobe akụkọ ọhụrụ maka njem nleta na kọntinent ahụ.
Ndi otu UNWTO si mba Africa kwenyere na ikuku Windhoek na-akwado Brand Africa.
Ndị ozi Africa kwenyere ịrụkọ ọrụ ọnụ iji chọta ihe ga-eme ka njem Africa ọzọ dịghachi ọhụrụ.
N'okpuru usoro nke Windhoek Pledge, ndị otu a ga - esonye ma ndị ọrụ gọọmentị na ndị nwe obodo na ndị obodo ka ha wuo akụkọ ọhụrụ, na - akpali akpali maka njem nleta gafee kọntinent ahụ.
Ndị minista mba Africa ekwenyela imekọ ihe ọnụ iji chọta ihe ga-eme ka njem a dịghachi ọhụrụ nke ndị ọrụ COVID-19 emetụtaghị.
Ndị minista ahụ kwupụtara ọkwa na Tọzdee na nkwupụta nkwonkwo ha na Nationstù Na-ahụ Maka Njem Nleta Worldwa nke Mba Ndị Dị n'Otu (UNWTO) Nzukọ Brand Africa mere na Windhoek, Namibia.
Ihe nkwa a bu iji mezuo ikike ndi njem nwere iji weghachite mgbagha, ha kwuru site na nkwuputa nkwonkwo.
“UNWTO na ndị otu ya ga-arụkọ ọrụ na African Union na ụlọ ọrụ nkeonwe iji kwalite kọntinent ahụ maka ndị na-ege ntị na ụwa ọhụrụ zuru ụwa ọnụ, ịkọ akụkọ banyere ndị mmadụ na akara ngosi dị mma,” UNWTO kwuru na nkwupụta ahụ.
Site na njem nlegharị anya a ghọtara dị ka ogidi dị mkpa maka mmepe mmepe na nsonye maka Africa, UNWTO nabatara ndị nnọchi anya dị elu na Mgbakọ Ọgbakọ izizi mbụ na-ewusi ụdị Africa ike.
Nzukọ a gosipụtara isonye nke ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mba Namibia, tinyere ndị isi gọọmentị na ndị ọrụ nzuzo si n'ofe kọntinent ahụ.
N'okpuru usoro nke Windhoek Pledge, ndị otu a ga-etinye ma ndị ọrụ ọha na eze na ndị nwe obodo na ndị obodo obodo iwu akụkọ ọhụrụ, na-akpali akpali maka njem nleta na kọntinent niile, ndị ozi kwuru.
Mmemme mmemme nke ọgbakọ Mịnịsta ndị njem njem n'Africa gụnyere ihe ngosi, mkparịta ụka mkparịta ụka, yana nleta teknụzụ nke Namibia Tourism Board haziri nke mere mmemme ahụ.
Nzukọ ahụ ekpuchiwo isi nzube ise. Ebumnuche nke mbụ bụ iji mee njem nlegharị anya dị ka ngalaba na-egbu obe na-enwe mmetụta dị ukwuu na mba na mpaghara mpaghara, iji bulie onyoonyo nke ebe ndị Africa na-aga dị ka ihe owuwu nke mba Africa niile.
Ebumnuche nke abụọ bụ ime ka ọha na eze na ndị ọrụ nzuzo yana ndị obodo na ndị mba ọzọ na-akwalite akụkọ na ahụmịhe dị mma banyere Africa, na-emepe mmekọrịta n'etiti mba iji mee ka ọnọdụ nke kọntinent ahụ sikwuo ike.
Ebumnuche nke atọ bụ imepụta ma bulie ikike na ikike maka njedebe na mmepe na njikwa, ire ahịa, gụnyere mgbasa ozi na ịkọ akụkọ, yana nkwukọrịta dị mma.
Ebumnuche nke anọ bụ iji mepụta akụkọ ndị na-akpali akpali, kwalite ikike na obere ụlọ ọrụ obere (SMEs) na asọmpi.
Ebumnuche nke ise bụ ịghọta usoro iwu dị maka ndị SME iji nweta ego mgbazinye ma kwado nnweta isi obodo na itinye azụmaahịa azụmaahịa n'oge ọrịa COVID-19.